नानीहरूलाई नचाउन बाल गीतनै उपयुक्त हुन्छन् भनेर छलफल चलाउने हो कि ? – हिमालयन ट्रिबुन
कोरोनाको बेला बालबालिकालाई गीत , संगीत , सिकाउने चलन बढेको छ , राम्रो हो । साना साना नानीलाई २,३ वर्षका छोरीहरूलाई ठूला महिला र पुरुषले गाउने प्रेम र उत्तेजना झल्काउने गीतहरूमा नचाउँदा, मुखमा लिपस्टिक पाउडर दल्दा एक छिन त राम्रो लाग्छ, तर यसले बालबालिकाको भविष्यमा राम्रो गर्ला र ? नानीहरूलाई नचाउन बाल गीत र बाल गीत नै उपयुक्त हुन्छन् भनेर कसैले छलफल चलाउने हो कि ?
साह्रै भद्धा किसिमले ‘स्तन’ र ‘कमर’ नचाएको ३, ५, ७ वर्षकी नानीले देख्दा मन चसक्क बिच्छ । साना साना छोराहरूलाई त्यसरी उत्तेजक नृत्यमा नाच्न लगाइन्न ।
‘छोरीहरूलाई’ चाहिँ सानै देखि ‘वस्तु’ बनाएर उनीहरूलाई अरुको सन्मुख पस्किने र ? बालबालिकालाई गीत, संगितमा लगाउनु राम्रो कुरा हो । तर उनीहरूकै उमेर अनुसारको गीत, संगित छन् नि । भारतमा विभिन्न टि.भी शोमा पनि यसरी साना साना नानीहरूले उत्तेजक नृत्यमा सबैले ताली बजाएको, ‘वाह वाह’ गरेको दृष्य देखेर मलाई लाग्छ, कसरी ‘हिन्दुस्तान’ ले आफ्ना बालबालिकालाई नयाँ जमानाको लागि तयार गर्दैछन् ।
अपशोच, त्यही रोग नेपालमा पनि आइपुगेको छ । अहिले बालपन हराएको छ । सानो नानीहरू जब ‘नाइटो’ देखाएको लुगा, लगाएर उत्तेजक गीतमा उत्तेजक नृत्य गर्छन्, मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ “धन्य मेरो छोरीहरू सानो हुँदा उनीहरूलाई कसो यस्तो उत्तेजक नृत्य गर्नु परेन ।”
तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नानीको उत्तेजक नृत्य ?